Ukholo lwembewu yemostade | Apg29
njani inxaxheba inkolelo ngakumbi, mkhulu kunye ukholo?
Kukwakho ezininzi phakathi kwabantu bakaThixo abo sengqondo ukuba nokholo olomeleleyo yinto nje nephupha kunye alinakuzuzwa. Kodwa loo nto bonke. Siza kubona esibhalweni ukuba kubonisa ntoni ukholo.
IBhayibhile ithetha okuninzi malunga ngokholo kunye nemfuneko ukholo. AmaKristu amaninzi bafuna ukholo lwabo ukukhula, ukuze ziba zinkulu kwaye yomelele ukholo. Kuyinto kufumana kuyo.
Kukwakho ezininzi phakathi kwabantu bakaThixo abo sengqondo ukuba nokholo olomeleleyo yinto nje nephupha kunye alinakuzuzwa. Kodwa loo nto bonke. Siza kubona esibhalweni ukuba kubonisa ntoni ukholo. Siye sifunde kule Ke, amaHebhere. 11: 1:
"Kodwa ukholo enetyala kukukholosa ngezinto ezithenjiweyo; kukweyiseka bubukho bezinto ezingabonwayo."
Ukholo asinto ingcamango, ingcamango okanye kucingelwa ukuba umntu ayikho kakhulu uqiniseke. Ukholo akunanto yakwenza izivamvo elibonakalayo, indlela ndiyabona izinto kunye iingqondo zethu.
Ngokufuthi sithi: "Ndicinga ukuba oku kwaye kodwa andiqinisekanga." Apha kuza kwinkolelo, mhlawumbi liyavumelana okanye uqikelelo. Ukholo yinto eyahlukileyo ngokupheleleyo, into eqinileyo, ngokupheleleyo ekhuselekileyo. Ukholo ke ithemba kwizithembiso zikaThixo nokuqiniseka lenyaniso yini akuyona ebonakalayo. Kwivesi 3 ithi:
"Ngokholo siyaqonda ukuba indalo yavela ngelizwi likaThixo, ukuze izinto ezibonwayo akwenzeki ngaphandle koko kubona."
Ngokholo ukufumana ukuqonda kunye nokuqonda. Omnye uyaqonda ngokukholwa. Ukholo kungaphezu ihlabathi elibonwa iliso kwaye ifikelela kwi leyinene emva elibonakalayo. Sifunda oku: "Ngokholo siyaqonda." Le yinyaniso. Kodwa ke abantu abangaguqukiyo babuyelayo kubo bonke, kwaye uthi: "Ngokusebenzisa ingqondo, siyakholwa." It yimveliso izivamvo emzimbeni kwaye "nengqiqo" esiqhelekileyo.
njani inxaxheba inkolelo ngakumbi, mkhulu kunye ukholo? IBhayibhile ithi:
"Ukholo luza ngokuva lukho ngelizwi likaThixo."
Ukholo iza xa simamela imfundiso yeBhayibhile xa atyabukile umshumayeli lowo ingqiqo enzulu kwi ngelizwi likaThixo. Ukholo nayo iza ngokufunda rhoqo iBhayibhile isikhokelo uMoya Oyingcwele. Ukuthanjiswa UMoya oyiNgcwele kaThixo yeyona ngutitshala kakuhle iBhayibhile. Xa kufundwa iLizwi, kubalulekile ukuba kugxininisa kakhulu izithembiso, kuba uThixo wathi, ke yena, waza wathembisa ukuba uqhuba. Kufuneka sibambelele ngokwenene ezo zithembiso eBhayibhileni, ngokuba kusithwala.
UAbraham wayeyindoda enokholo olomeleleyo. UThixo wayemnike isithembiso unyana, nto leyo engenakwenzeka eziphilayo. Kodwa wakwazi ukubona engenakwenzeka kwaye basakholelwa ukuba bekunokwenzeka ngokupheleleyo. Siye sifunde verbatim nuBibeln, eRoma. 4: 18-22:
Ukuze uzuko uThixo yindlela ukuze ufumane ukholo. Kodwa ke ubuqaqawuli bukaYehova ngendlela efanelekileyo. Awukwazi ukwenza njengoko ithi kuIsaya. 29:13 (nuBibeln):
"Aba bantu basondela kum ngomlomo wabo, bendizukisa kum ngomlomo wabo; Kanti intliziyo yabo ikude lee kum, nokundoyika kwabo uThixo lufundwa kuphela babantu."
Kuziwa intliziyo ebhatalelwa ukudumisa uThixo ubomi bakhe, iingcinga, ngamazwi nangezenzo. Asizange Abraham.
Ngesinye isihlandlo Bambuza ke uYesu abafundi ukuba ukusasaza ukholo lwabo. "Yandisa ukholo lwethu," batsho. Waphendula uYesu wathi kubo, Mat. 17:20:
"... Inene, ndithi kuni, Beningathi, ninokholo olunjengokhozo lwemostade, nithi kule ntaba, Suka apha uye phaya, isuke,. Kungabikho nto iya kuninqabela"
Akukho nto wathembisa kwiLizwi likaThixo, okanye ukuba kuxhamle abantwana bakaThixo akunakwenzeka kwabo ninokholo olunjengokhozo lwemostade. ukholo lwenene babeka ithemba labo lonke kwilizwi likaThixo kutyhilwa kunye nentando yakhe.
UYesu uye walithwalisa isithembiso esimangalisayo kuYohane. 14:12
"Inene, inene, ndithi kuni, Lowo ukholwayo kum uya kwenza imisebenzi endiyenzayo;. Kunye nemisebenzi emikhulu kunale uya kuyenza, ngokuba mna ndisiya kuye uBawo"
Oku kuthetha ukuba ukuba bonke abo ukholo lwenene lokukholwa kuYesu ukuba enze imisebenzi, kude kakhulu kunokuba wenzayo. Ingaba yigadi, into alinakuzuzwa? Akunjalo konke konke! Ngokuphulaphula abashumayeli nguMoya-ezaliswe ukufundisa kunye ngenkuthalo ukufunda iLizwi ukufunda likaThixo onokuzuza nkolelo.